Maxaa ka cusub khilaafkii Abu Mansur iyo Axmed Cabdi Godane? (Warbixin) - iftineducation.com
iftineducation.com – Dhaqdhaqaaq la la isugu soo dhoweynayo Hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo loo yaqaan Abuu Zubeyr iyo Sheekh Mukhtaar Roobow “Abuu Mansuur” ayaa ka socda degmada Waajid ee Gobolka Bakool.
Waxaa halkaas ku sugan xubno saraakiil ah oo Shabaab ka tirsan kana soo jeeda beesha uu ka dhashay Abuu Mansuur ee Leysaan.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in dadaaladaasi socdo ay soo qaban qaabiyay xubnaha ku heybta ah Abuu Mansuur, kuwaasi oo doona in la isu geeyo lana hadal siiyo Amiirka Al-Shabaab Abuu Zubeyr iyo Abuu Mansuur, waxaana xubnaha dadaaladaasi horboodaya ka mid ah Waaliga Wilaayada Galgaduud Sheekh Xasan Yacquub Cali, Sheekh Mahad C/kariin oo ah Waaliga Bay iyo Bakool iyo saraakiil kale.
Abuu Mansuur ayaa tan iyo markii Hogaamiyaha Al-Shabaab uu bilaabay inuu ka taqaluso xubnihii ka soo horjeeday, sida Ibraahin Afghan iyo Macalin Burhaan ku sugnaa Miyiga deegaanada Bay iyo Bakool, iyadoo aysan jirin wax xiriir ah oo dhex maray isaga iyo Hogaamiyaha Shabaab.
Sheekh Mukhtaar Roobow waa Hoggaamiyaha kaliya ee ka badbaaday xubnihii ku fikirka ahaa oo mid la dilay iyo mid cararay noqday, waxaana ugu danbeeyay Abuu Mansuur Al-Amriiki iyo Usaama Biritaani oo labada ahaa muwaadiniin u dhashay dalalka Mareykanka iyo Britain oo horaantii bishan maliishiyo ka amar qaata Godane ay dileen.